इन्टरनेट नचलेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन फास्ट बनाउने तरिका – Jagaran Nepal
इन्टरनेट नचलेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन फास्ट बनाउने तरिका
इन्टरनेट अहिले अत्यावश्यक जस्तै बनेको छ । स्मार्ट फोनहरुको प्रयोगसँग मानिसमा इन्टरनेट प्रयोग अनिवार्य जस्तै बनेको छ । यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारी रहेको छ । लकडाउन आंशिक रुपमा खुलेको छ ।
कोरोनाको विश्वव्यापी असर र नेपालमा पनि संक्रमित बढिरहेका छन् । यस्तो बेलामा सूचना र जानकारी पाउनका लागि पनि इन्टरनेट अत्यावस्यक जस्तै बनेको छ । तपाईको घरमा रहेको इन्टरनेट स्लो भएका कारण तपाईले चलाउन खोजेको ब्राउजर वा एप नचलेर हैरान हुनु भएको छ होला ।
यतिबेला इन्टरनेट प्रोभाइडरसमेतसँग सम्पर्क कायम हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले हामीले यहाँ केही इन्टरनेट चल्न सहयोग हुने टिप्सहरु प्रस्तुत गरेका छौं जुन तपाईको लागि सहयोगी बन्न सक्छ ।
तपाईले वाइफाइ कसैलाई दिएको पनि हुनसक्छ । वा तपाईको वाइफालाई कसैले विभिन्न एपहरुको प्रयोग गरेर चोरी गरेर चलाइरुहेको हुने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला तपाईले वाइफाइको पासवर्ड फेर्नु उपपयुक्त हुन्छ । बेलाबेलामा वाइफाइको पासवर्ड परिवर्तन गर्दा इन्टरनेट स्पिडमा चल्छ ।
काम सुरू गर्नु अघि तपाईंको वाइफाइ राउटर रिबुट गर्नुहोस्। यो रिबुट हुने बित्तिकै यसले पूरानो मेमोरी खाली हुन्छ र सबै अपडेटहहरू इन्स्टल हुन्छन्।
राउटर राखेको स्थान
राउटर राखिएको स्थानले पनि तपाईको इन्टरनेटको गतिलाई निर्धारण गर्दछ ।
यदि तपाईको राउटर राखेको स्थान छनोट नै गलत छ भने इन्टरनेट चल्न नै मुस्किल हुन्छ । यसर्थ राउटरलाई भरसक अग्लो स्थान र अरू इलेक्ट्रोनिक आईटमहरुको नजिक नराख्नोस् ।
यदि एन्टेनासहितको राउटर छ भने, यसको एन्टेनालाई माथि पर्ने गरि राख्नुहोस् ताकि यसले सिंग्नल राम्रोसँग समात्न सकोस् ।
इन्टरनेटले काम गरेको छैन भने अलग्गै अर्को एन्टेना जोडेर पनि फास्ट बनाउन सकिन्छ । राउटरले आन्तरिक एन्टेनामा काम गर्दछ भने गति बढाउन तपाईंसँग बाहिरबाट पनि एन्टेना थप्ने विकल्प छ । बाह्य एन्टेना बजारबाट किन्न सकिन्छ।
प्रत्येक राउटरको क्षमता निश्चित हुन्छ । जबकी राउटरले सिंग्नल निश्चित क्षेत्रभन्दा पर पु¥याउन सक्दैन भने यस्तो बेला तपाईले बुस्टरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि तपाइले रेन्ज एक्सटेण्ड गर्ने बुस्टर पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ ।